တိရစ္ဆာန်နှင့်အမျိုးအနွယ်၏အန္တရာယ်များ Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 31, 2011 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2016 Douglas Karr
ငါဖတ်ပြီးသောကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်နှင့်စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်အပေါ်များစွာသက်ရောက်သောကျွန်ုပ်ဖတ်သောစာအုပ်များရှိသည်။ စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Mark Earl ရဲ့ Herd: ကျွန်ုပ်တို့၏အစစ်အမှန်သဘာဝကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြုအမူကိုမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် နှင့်အခြား Godin ရဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် လူမျိုးစုများ - မင်းကိုမင်းတို့ ဦး ဆောင်ဖို့မင်းတို့လိုအပ်တယ်.
နွားများနှင့်အမျိုးအနွယ်များအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်အလွန်အပြုသဘောဆောင်သည်။ ခေါင်းဆောင်များကဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် Godin ၏ TED ဗီဒီယို) အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ဖှယျနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နွားများနှင့်လူမျိုးစုများကိုကြီးမားသောယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နွားများနှင့်အမျိုးအနွယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့၏အပြုအမူကိုအကောင်းမြင်သူတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များကနွားကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်သည့်အခါထိုစာအုပ်များနှင့်ဗီဒီယိုအားလုံးတွင်စကားပြောကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကမှောင်မိုက်သောအရာကိုလျစ်လျူရှုကြသည်။
နိုင်ငံရေးသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာဘလော့ဂ်များတွင်လူတိုင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်တောက်ပသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာ၏သြဇာရှိခြင်းကိုငါငြင်းခုန်လိမ့်မည်။ အားလုံး ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုအနိုင်ရသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ၏စွမ်းရည်ကိုလုပ်ခြင်း။ ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နည်းပညာအမှန်တကယ်အနိုင်ရသောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ပါတယ် 2008 ရွေးကောက်ပွဲတွေ သမ္မတအိုဘားမားကိုအိမ်ဖြူတော်မှာနေရာချပေးလိုက်တယ်။
မှားယွင်းသောခေါင်းဆောင်များ - တစ်ခါတစ်ရံအခန်းထဲရှိသြဇာအရှိဆုံး၊ အသိဉာဏ်ဆုံး၊ အလှဆုံးသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်မမှန်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏလိုက်နာလေ့ရှိသည်။
နာခံမှုရှိတဲ့နောက်လိုက်များ - နာခံမှုကိုတစ်ခါတစ်ရံကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်မှုတ်သွင်းသော်လည်းအဝိဇ္ဇာမှုတ်သွင်းသည်။
ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုမှုတ်သွင်းခဲ့သောတိုင်းပြည်၏လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဥပမာသမ္မတအိုဘားမား။ အခုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အသံတွေထဲကတစ်ခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ့်တရပ်ကတော့သမ္မတအိုဘားမားပြောခဲ့တာပဲ အမေရိကန်တွေကပျင်းတယ်။ ဤအကိုးအကားကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြထားသော်လည်းညာဘက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး၊ ၎င်းကိုဆက်စပ်မှုမရှိသော်ငြားလည်းမှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်များသည်၎င်းကိုးကားချက်ကိုအသုံးပြုကြပြီးသူတို့၏နွားများကကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများသည်ပျင်းရိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ကိုအိုဘားမားအားဆက်လက်တည်မြဲနေဆဲဖြစ်သည်။ သူပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ငါလက်ျာဘက်သာရွေးတော့မယ်မစဉ်းစားခင်မှာလက်ဝဲနိုင်ငံရေးကတကယ့်ကိုကွာခြားနေတယ်။ သမ္မတအိုဘားမားသည်လူနည်းစုဖြစ်သောကြောင့်လူအများစုသည်သူ၏နိုင်ငံရေးကိုသဘောမတူသောကြောင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာကာကွယ်ရေးအတွက်ခက်ခဲတဲ့စွပ်စွဲချက်ပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမ္မတနဲ့သဘောမတူနိုင်တာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဤသည်ကံဆိုးသည်နှင့်အချို့လက်ဝဲရှေးရှေးများကတွန်းခံရဖို့ဆက်လက်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအော်ဟစ်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုသည်တိုင်းပြည်ကိုကူညီရန်ဘာမျှမလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်နွားကိုခွဲထုတ်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ရီပတ်ဘလစ်ကန်များအနေဖြင့်အပိုဆောင်းအခွန်များနှင့်အစီအစဉ်အသစ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အသစ်များအားစိန်ခေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများလျှော့ချခြင်းကြောင့်အစပျိုးခဲ့သောဂရိနှင့်အခြားနိုင်ငံရပ်ခြားရှိအဓိကရုဏ်းများသည်လူတိုင်းအတွက်စိုးရိမ်သင့်သည်။ သို့သော်ဘယ်ဘက်မှအငြင်းအခုံသည်“ သင်သည်လူများကိုဂရုစိုက်သလားသို့မဟုတ်သင်မဟုတ်လော” ဟုအမြဲတမ်းပြန်လာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစီအစဉ်များကိုဖြတ်တောက်လိုပါကလူများကိုသင်ဂရုမစိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံကုန်သွားတဲ့အခါဘယ်သူကကူညီသလဲ။ သဘာဝအားဖြင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုသည်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိရန် (လှိုင်းမျှတသောခေါ်) ကိုရရှိရန်လှုံ့ဆော်သည်။ နွားများကွဲနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်မှုများကိုရာထူးမှဖယ်ရှားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံရေးပါတီများသည်နွားများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးပြုပုံနှင့်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားနေသည်။ လိမ်ခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသည်မှာ - သို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြုခြင်းသည် - နွားသည်ပြင်ပရှိလူများကိုတိုက်ခိုက်ပုံဖြစ်သည်။ ငါဒီ post ကိုတစ်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားကနေအနည်းငယ်လည်ချောင်းနာမှတ်ချက်များကိုငါရရှိမည်အာမခံပါသည်။ နွားတိုက်ခိုက်မှုသည်အလွန်နာကျင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှု၏အင်အားသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်နွားကိုလမ်းလွဲစေနိုင်သည်။ လူအများစုကဘာမှမပြောခြင်းဖြင့်နွားကိုရှောင်ကြသည်။ ဒါကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့မထင်ဘူး စစ်ပွဲသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသော်ငြားသမိုင်းကြောင်းရှိရက်စက်မှုအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြနိုင်ပြီး၎င်းသည်မှားယွင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး နှင့်ကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်မသိမှုကြောင့်မျက်စိမမြင်ဘဲနောက်ကွယ်မှ လိုက်၍ လိုက်နေသည့်နွားအုပ်သို့ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နွားများသည်ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲများနှင့်စီးပွားရေးပြိုလဲစေခဲ့သည်။
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များကဤကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံရေးဥပမာတစ်ခုကိုသင်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်လိုပါက Ron Paul နှင့်သူ၏မီဒီယာနှင့်ညာတောင်ပံများအပေါ်သူ၏ဆက်ဆံမှုကိုသာကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ အကယ်၍ ပေါလ်ကအိုင်အိုဝါကိုအနိုင်ရလျှင်အဓိကသတင်းလွှင့်ဌာနနှစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ကြားသည်မှာ -အိုင်အိုဝါအစုအဖွဲ့၏တရားဝင်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်သည်“ ငါထင်တာကတော့အိုင်အိုဝါဟာ“ ယူနိုက်တက်စတိတ်” လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့နွားစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
wow တကယ်ပဲလား အကယ်၍ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများစုသည်မဲဆန္ဒရှင်အများစုနှင့်သဘောမတူပါကပြproblemနာမှာသူတို့၏အမြင်မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်စကားမပြောနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေခြင်းလား။ Ron Paul သည်သူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုထောက်ခံရန်နှင့်မဲပေးရန်စံချိန်များစွာရှိသော်လည်းအလွှာများစွာတွင်မတရားတံဆိပ်ကပ်ခြင်းခံနေရသည်။ သို့သော်နွားသည် Ron Paul ကိုမကြိုက်ပါ။ သူသည်အပြင်လူ ဖြစ်၍ နွားအုပ်များသည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးစားနေကြသည်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကငါဘယ်မှာတွေ့ခဲ့တာလဲဆိုတာပါ သာ ရှေးရိုးစွဲမဲဆန္ဒရှင်များ၏ ၆ ရာခိုင်နှုန်းက Donald Trump သည်သူတို့၏မဲကိုသြဇာညောင်းမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောသတင်းဘူတာနှစ်ခုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်နှစ် ဦး စလုံးမဲရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး Trump ပယ်ချခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သင်ရပ်တန့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ၆% ဟာကြီးမားတဲ့သြဇာသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ များစွာသောသမ္မတအနိုင်ရခြင်းနှင့်ထိုထက်လျော့နည်းအပေါ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြ! သို့သော်ဝက်အစုသည် Trump ကိုအမှုအရာဖြစ်စေရန်မလိုလားပါ။ ထို့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်စီးခြင်းသည် ပို၍ အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ငါနိုင်ငံရေးကိုရှေးရှေး (နွားဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်စကားပြောသောအခါသူက“ သူကအရမ်းကောင်းတဲ့ဟောပြောသူပဲ” ဟုမကြာခဏကြားတတ်သည်။ သို့မဟုတ် "သူကအပေါက်ကြီးတစ်ခုပဲ" ငါလက်ရှိသမ္မတနှင့်ရီပတ်ဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဆွေးနွေးရန်အဖြစ်။ ထိုသို့သောစကားများကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်အတော်များများထုံထိုင်းသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်တကယ့်ပြသနာကိုလုံးဝနားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်ထိုသူ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်လား၊ ငါကသူတို့ဘယ်လောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုဂရုမစိုက်နိုင်လောက်အောင်နောက်ထပ်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုတောင်ငါမျှော်လင့်နေမိလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ** တွင်းကြီးများက ပိုမို၍ အလုပ်များသည်။
နောက်ဆုံးဥပမာ - ကျွန်တော့်မိဘတွေမကြာသေးခင်ကသူတို့အကြောင်းကိုလာလည်ပတ်တယ် လူမှုဖူလုံရေး။ သူတို့တစ်သက်လုံးကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်၊ ငါ့အဖေလည်းရေတပ်ကနေအနားယူခဲ့တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအငြိမ်းစားယူပြီးလူမှုဖူလုံရေးကိုစုဆောင်းကြတယ်။ ကျွန်မတို့ဘာကြောင့်လူမှုဖူလုံရေးခံစားခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့စနစ်ကအဲဒီအချိန်တုန်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည်ရှေးရိုးဆန်ပြီးတော်တော်ရိုးသားကြသည် ခေါင်းစဉ် သူတို့ရဲ့ပေးချေမှုရတဲ့ရန်။ ၎င်းသည်စနစ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုရှိမရှိမည်သို့ပင်ဆိုစေနွား၏ခံစားချက်နှင့်လူမှုရေးလုံခြုံမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြောဆိုမှုကိုသူမမည်သို့တုန့်ပြန်သည်ကိုများစွာဖော်ပြထားသည်။
မင်းမှားယွင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးနွားဥာဏ်ပညာကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်ချင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ Reality ရုပ်မြင်သံကြားသည်လေကြောင်းလိုင်းများကိုလွှမ်းမိုးထားပြီးရွေးကောက်ပွဲ၌ထက် American Idol ကိုလူအများကမဲပေးကြသည်။ နွားသည်အကျိုးအမြတ်ထက်အချိန်တိုအတွင်းကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ဆက်လက်မဲပေးနေကြသည်။ စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အဖြစ်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၌အောင်မြင်ကျော်ကြားသော crapy ကုမ္ပဏီများနှင့်ရုန်းကန်နေရသောစိတ်ကူးယဉ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အချက်အလက်များသည်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးသောကြောင့်ကံဆိုးသည် (သို့မဟုတ်အချို့အတွက်ကံကောင်းသည်) ။ ထိုထင်မြင်ချက်သည်နွားများကိုဖြတ်ပြီးဆက်လက်တည်တံ့သွားသောအခါ၎င်းသည် ပို၍ ပင်အင်အားကြီးမားလာသည်။ ထိုစွမ်းအားကိုအသုံးချခြင်းသည်ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအခါနွားများ၏အပြုအမူကိုစဉ်းစားပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှုကိုဆွဲဆောင်သောနည်းဗျူဟာများကိုပြen္ဌာန်းပါသည်။
Tags: 2011 ရွေးကောက်ပွဲရှေးကောကျပှဲတိရစ်ာဆနျအုပျအိုဘားမားရိုပေါအနွယ်
Viralheat - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း